Tontolo iainana : manohy hatrany ny fanentana i Mily Clément | NewsMada
Tontolo iainana : manohy hatrany ny fanentana i Mily Clément
Efa an-taonany maro no nirona tamin’ny fanentanana ny mpiara-belona amin’ny fiarovana ny tontolo iainana i Mily Clément. Voaporofo anatin’ireo hirany, toy ny “Mandrora mitsilany”, izany. Mbola manohy izay hatrany ity mpanakanto ity, amin’ny alalan’ny fampisehoana toy izay nataony tany Sainte Marie, ny asabotsy lasa teo. Fampisehoana naharitra ora roa teo ho eo, nizaran’i Mily Clément indray ireo hirany malaza, toy ny “Mifankatiava”, “Ho meva”, sns.
Mazava loatra fa nentina nanangonam-bola hampiasaina amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, sy iadiana amin’ireo loza mihatra amin’ny zavaboahary any amin’ny Nosy Sainte Marie ny seho. Anisan’izany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny “concombres de mer”, izay nalaza be tamin’ity faramparan’ny taona iny. Nisy ny taratasim-bola nitentina 1.9 tapitisa Ar natolotra iasana, nandritra ny lanonana.
Tsiahivina fa efa hatramin’ny taona 2005 no nanentana ny mponin’i Sainte Marie, tamin’ny alalan’ny fandraisany anjara tamin’ny “Zagnaharibe” na ny “Festival des baleines”, izay nanaovany hira manokana i Mily Clément.